FITSDIHANA TANY MAHAJANGA : « Tsy misy idiran’ny antoko HVM ny nahatonga maro anay zanatany nitsena an’i Rivo Rakotovao »
Nidoka ny fahatongavan’ny mponina nitsena an’i Rivo Rakotovao, ny sabotsy teo, tao Mahajanga ny mpomba ny fitondrana fa indrindra ireo akaiky ity filohan’ny Antenimierandoholona ity. 9 novembre 2017
Nilaza aza ny sasany fa porofo mitohoka amin’ny tendany ny amin’ny fitiavan’ny vahoakan’i Mahajanga ny antoko Hvm iny fihetsika nasehon’ny mponina tamin’ny sabotsy teo iny. Diso tanteraka anefa izany raha ny nambaran’ny zanatanin’i Mahajanga tafaresaka taminay, omaly. « Tena marina avy any Manjakandriana i Rivo Rakotovao fa lehibe tao Mahajanga.
Tao Manjarisoa no nahabe azy ary voakarakara tsara. Nilaza izy fa nahazo ny anjarany tao amin’ny kartie Manjarisoa ka hamafa sy hanamboatra ireo kartie « jirany » amin’izay hono ny tenany. Tsy misy fifandraisana amin’ny antoko Hvm ny naha- tongavanay zanatanin’i Mahajanga nitsena azy, ny sabotsy teo, fa fomba iray nentinay mampahatsiahy azy ny fampanantenana nomeny. Miandry izahay ary fantatr’i Rivo Rakotovao tsara ny fomba fisainan’ny zanatanin’i Mahajanga.
Mahafantatra izany tsara ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc ka azony anontaniana », hoy ireto farany. « Mitady fampandrosoana izahay fa tsy midika akory fa hifidy ny antoko Hvm izahay raha tonga nitsena an’i Rivo Rakotovao ny sabotsy teo. Aleo tsorina ny marina fa tsy misy idiran’ny Hvm ny fitsenana an’i Rivo Rakotovao farany teo. Raha napetraka tamin’ny mpikambana Hvm ny fitsenana azy dia mino marimarina fa tsy maharototra ny olona any Mahajanga izany. Azonareo anontaniana ihany koa ireo minisitra na tompon’andraikitra ambony hafa milaza sy mitonontena ho zanak’i Mahajanga mahakasika ny fomba fisainanay zanatanin’i Mojangaï », hoy hatrany ny fanazavana nataon’ireto zanatanin’i Mahajanga ireto.
Na izany na tsy izany, ohatra, somary tara, hoy ny fiteny avy any avaratry ny Nosy ny fahatsapan’ingahy Rivo Rakotovao tena fa tokony karakaraina amin’izay ireo fokontany na kartie « jirany » ao Mahajanga. 4 taona be izao no mpikambana tao amin’ny governemanta Hvm ny tenany ary avy nisahana ny ministera misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany (M2PATE). Fa maninona izao ankatoky ny fifidianana Filoham-pirenena izao vao mikofoka ny lehilahy ary vao tonga saina fa tokony hamboarina amin’izay ny tanànan’i Mahajanga e ? Mazava ny valiny ary mazava ihany koa ny voalazan’ireto zanatanin’i Mahajanga ireto….
FITSDIHANA TANY MAHAJANGA
2017-11-13 18:00:29 par jf
Tsymisy itsabahan’i teti-bolam-panjakana izany fa tokonymandoaavy anyampaosiny i Rivo Rakotovao. Tsy andraikitrin’ny filohan’ny antenimieran-doholonanymisahanany fanadiovana quartier fa anjaran’nycommune. Koa satria efa fitondrana mivaralila sy mpandainga moa no misy ankehitriny ka tsy mahagaga raha mifampitsabaka amin’ny andraikitrin’ny hafa ny HVM.
Votsotra ny menoty rehetra natao taminy BEBETO JIOLAHY RAINDAHINY AO TOAMASINA (273) 13 octobre 2018 Nisy nikasa hanakantsakana ny fandalovan’ny kandidà Andry Rajoelina NOSY BE (186) 15 octobre 2018 Lehilahy miisa 3 no voasambotry ny zandary VONO OLONA FENO HABIBIANA TENY TANJOMBATO (180) 13 octobre 2018 Nandresy lahatra ny mponin’Itasy FILOHAN’NY ANTOKO MMM – FREEDOM - MAITSO (165) 15 octobre 2018 Niloa-bava sy nitondra valin-kafatra manoloana ny fitakian’ireo kandidà 22 FILOHAN’NY HCC (160) 17 octobre 2018 Efa betsaka ireo lasibatra eto Antsiranana FISOLOKIANA AMIN’NY FINDAY (107) 18 octobre 2018